Mukadzi ndiye ari panyanga	Friday, 14 June 2013 08:54	naMuchaneta Chimuka NYAYA dzekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume dziri kuratidza kudzika midzi munyika muno sezvo madzimai akawanda ari kuonekwa achiita mabasa uye
Makwikwi eKwayedza African Woman of the Year	Friday, 14 June 2013 08:26	neMunyori weKwayedzaVANHUKADZI hounoi mukana wekuti muhwinhe mibairo mikuru yakarohwa nechando mumakwikwi eKwayedza African Woman of the Year.
Makwikwi eKwayedza African Woman of the Year	Friday, 07 June 2013 06:49	neMunyori weKwayedzaVANHUKADZI hounoi mukana wekuti muhwinhe mibairo mikuru yakarohwa nechando mumakwikwi eKwayedza African Woman of the Year.
Vanhukadzi vakaremara vobatsirwa	Thursday, 06 June 2013 11:16	naNyasha MutenaBOKA revanhukadzi reHope Resurrect Trust, iro richangobva mukuvambwa rakuparura chirongwa chekusimudzira vanhukadzi vakaremara sezvo vamwe vavo vachirasikirwa Read more...
Makwikwi eKwayedza African Woman of the Year	Friday, 31 May 2013 07:01	neMunyori weKwayedzaVANHUKADZI hounoi mukana wekuti muhwinhe mibairo mikuru yakarohwa nechando mumakwikwi eKwayedza African Woman of the Year.
Makwikwi eKwayedza African Woman of the Year	Thursday, 23 May 2013 08:52	neMunyori weKwayedzaVANHUKADZI hounoi mukana wekuti muhwinhe mibairo mikuru yakarohwa nechando mumakwikwi eKwayedza African Woman of the Year.Tumirai mifananidzo yenyu makapfeka mbatya dzezvipfeko zvemuAfrica (African attire) kuKwayedza, bepanhau revanhu, kuti muve nemukana wekuhwinha mibairo Read more...
Mukadzi ari panyanga	Thursday, 23 May 2013 08:43	naKingstone MapupuHUTUNGAMIRI hauna basa kuti munhukadzi kana kuti munhurume, chinodiwa bedzi kuzvipira pachinzvimbo chaunenge uri panyanga, uchitevera mitemo mubasa rako pasina kuita hudyire. Read more...
Makwikwi eKwayedza African Woman of the Year	Thursday, 09 May 2013 12:12	neMunyori weKwayedzaVANHUKADZI hounoi mukana wekuti muhwinhe mibairo mikuru yakarohwa nechando mumakwikwi eKwayedza African Woman of the Year. Tumirai mifananidzo yenyu makapfeka mbatya dzezvipfeko zvemuAfrica (African attire) kuKwayedza, bepanhau revanhu, kuti muve nemukana wekuhwinha mibairo inosanganisira zvitofu, mazakwatira emari pamwe Read more...
‘Kuchembera huda’	Thursday, 09 May 2013 12:05	naNyasha Mutena“KUCHEMBERA huda! Madzimai katsika kekuti kana mava mudzimba umu moti, ‘aiwa, izvi hazviite, ndava amai vemba’ zviregerei.” Mashoko aya akataurwa nemumwe mudzimai wekuGlen View 3, muHarare uyo ari kuriritira mhuri nokugadzira achitengesa zvemucheno zvakaita sechuma nemaringi.
Vopunduka nehuku	Friday, 03 May 2013 00:00	naMuchaneta Chimuka“HAPANA chinouya choga munhu akapeta mawoko.” Mashoko aya akataurwa neimwe chirikadzi yekuMbare Read more...
Makwikwi eKwayedza African Woman of the Year	Friday, 03 May 2013 00:00	neMunyori weKwayedzaVANHUKADZI hounoi mukana wekuti muhwinhe mibairo mikuru yakarohwa nechando mumakwikwi eKwayedza African Woman of the Year.Tumirai mifananidzo yenyu makapfeka mbatya dzezvipfeko zvemuAfrica (African attire) kuKwayedza, bepanhau revanhu, kuti muve nemukana wekuhwinha mibairo
Madzimai ovakirana dzimba, kutengerana mota	Monday, 29 April 2013 12:50	naNyasha MutenaBOKA remadzimai reHigh Hope Round Tables ropundutsa vanhukadzi nekuita zvirongwa zvekupanana mari mwedzi woga-woga izvo zvavandudza upenyu hwavo.
Nechinangwa chekusimudzirana uye kuderedza katsika kekuzendamira pavanhurume pakuriritira mhuri, madzamai aya akaparura chirongwa chekuita majana ekupanana mari
« Start Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next End »	Page 1 of 209	Search	Sponsored Links